Shiinaha Agabka kiimikada ee loo yaqaan 'Disksektoyte Dislubenzuron' ee loogu talagalay soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha beeraha | Senton
Daawooyinka loo yaqaan 'Agrochemical Insecticide Diflubenzuron For Agrochmical'
Magaca Badeecada Diflubenzuron
CAS Maya 35367-38-5
Kala-miiridda biyaha 0.08 mg / L
Kala-furfurka dareeraha kale DMSO: 12 g / 100 g; Acetone 0.615 g / 100 g
Wax soo saarka: 300 tan / bishii
Gaadiidka: Badweynta, Dhulka ， Hawada
Sunta cayayaanka lagu cuno DiflubenzuronwaaSunta cayayaankaee ahbenzoylureafasalka. Waxaa loo adeegsadaa maareynta keymaha iyo dalagyada ka soo baxa dhulka si loo xusho cayayaanka cayayaanka, gaar ahaanteendhooyinka keynta aboor diir,boll weevils,aboorka guska, iyo noocyada kale eeaboor. Waxaa si weyn loo isticmaalaa sida Balaastik gudaha Hindiya loogu talagalay xakamaynta dirxiga kaneecada waxaa iska leh maamulka Caafimaadka Bulshada.Diflubenzuron waa a sunta dila benzamide loo isticmaalo kaynta iyo dalagyada duurka si xul ah xakamee cayayaanka iyo dulinleyda. Mabda 'bartilmaameedka noocyada cayayaanka ayaa ah aboor gibsi, diir teendhada kaynta, dhowr aboor cunis weligiis cagaaran iyo weewlka boll.
Xakamaynta noocyo badan oo cayayaanka caleenta cunaya kaymaha, qurxinta qoryaha iyo midhaha. Waxay xakameysaa cayayaanka waaweyn ee cudbiga, soya digirta, liinta, shaaha, khudaarta iyo boqoshaada. Sidoo kale wuxuu xakameeyaa dirxiga duqsiga, kaneecada, ayaxa iyo ayaxa haajira. Waxaa loo adeegsaday sidii ectoparasiticide dusha adhiga loogu talagalay xakameynta injirta, boodada iyo dirxiga dirxiga. Sababtoo ah xulashadeeda iyo nabaad-guurka degdegga ah ee ciidda iyo biyaha, diflubenzuron ma laha ama kaliya saameyn yar oo ku saabsan cadaawayaasha dabiiciga ah ee noocyada cayayaanka ee waxyeelada leh. Guryahaani waxay ka dhigayaan kuwo ku habboon ka mid noqoshada barnaamijyada xakamaynta isku dhafan. Diflubenzuron wuxuu wax ku ool yahay 25-75 g / kahortaga cayayaanka badankood ee caleenta quudiya ee kaymaha kujira; uruurinta 0.01-015% eek u wajahan aboorka, khudaarta caleenta iyo cayayaanka kale ee cuna caleenta miraha sare; uruurinta 0.0075-0.0125% ee ka dhanka ah caarada miridhku liinta; qiyaas ah 50 · 150 gagaal dhowr cayayaan oo cudbi ah (cudbi weew boll, goroyo, dixir caleenta), digirta soya (soya bean looper complex) iyo galley (worldworms). Inta aan ku shaqeyneyno badeecadan, shirkadeena wali waxay ku shaqeyneysaa alaabooyin kale, sidaDhexdhexaad Caafimaad, Buufinta cayayaanka, Saabuun Cayayaan , Sunta Cayayaanka ee Reerka, caafimaadka bulshada iyo wixii la mid ah.
Ma waxaad raadineysaa Xakamaynta habboon ee Fleas iyo Blowfly Larvae soo saaraha & alaab-qeybiyaha? Waxaan haynaa xulasho ballaaran oo qiimo aad u fiican ah si aan kaaga caawino inaad hal-abuur yeelato. Dhammaan Xakamaynta Cayayaanka Baaxadda Weyn waa kuwo tayo leh. Waxaan nahay Warshadda Asalka Shiinaha ee sunta cayayaanka ee Benzamide. Haddii aad qabtid wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Hore: Si baahsan ayaa loo isticmaalay sunta cayayaanka ee loo yaqaan 'Deltamethrin'
Xiga: Ethofenprox ee cayayaanka lagu dilo oo tayo sare leh
Bayoolaji cayayaanka dhirta jaangooyaha xakamaynta ...
Tayada Sare ee cayayaanka cayayaanka lagu qalajiyo
Tayada Sare ee Sunta cayayaanka ee loo yaqaan 'Diflubenzuron'
Diflubenzuron 25% Tech cayayaanka